အရေပြားအောက်ဆုံးအဆီတစ်ပျံ့အက္ခရာ (အဘယ်သူမျှမမြင်နိုင်နယ်နိမိတ်) အိုင်းနာဟုခေါ်သည်ရှိခြင်း, ရောင်ရမ်းဖြစ်စဉ်ကို acute မှဘာသာရပ်ဖြစ်သည့်အတွက်တစ်ဦးကအခွအေနေ။ အလွယ်တကူရောဂါ၏ကနဦးအဆင့်တွင်သည်းခံငြားလည်း, ကလျင်မြန်စွာပိုမိုလေးနက်သောအကျိုးဆက်များသို့တိုးတက်နိုင်ပါတယ်။
ဤဒေသရှိ purulent လုပ်ငန်းစဉ်၏ရောဂါလက္ခဏာများမှာ:
အဆိုပါဇုန် phlegmon အတွက်နီခြင်း,
အရေပြား palpation အပေါ်သနားစိတ်။
အိုင်းနာ - ကုသမှု
ကံမကောင်းစွာပဲ, လည်ပင်းအရေပြားအောက်တွင်ပျံ့ရောင်ရမ်းခြင်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုထိထိရောက်ရောက်သာခွဲစိတ်နေဖြင့်ဖယ်ရှားပစ်။ မဖြစ်မီခွဲစိတ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဧည့်ခံသင်တန်းဖျော်ဖြေ ပဋိဇီဝဆေး၏ ။ သေခြင်းဆီသို့ဦးတည်စေခြင်းငှါကတည်းက Phlegmon လည်ပင်း, အရေးပေါ်ကုသမှုပါဝငျသညျ။
ရောဂါ၏ဤအမျိုးအစားကိုမကြာခဏအစောပိုင်းအဆင့်အတွက်လူနာအားဖြင့်အစပျိုးဒါကြောင့်ဆရာဝန်မှရည်ညွှန်းခိုင်မာတဲ့နာကျင်မှုရောဂါနှင့်ကျယ်ပြန့် cellulitis အတွက်များသောအားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်။
ရောင်ရမ်း lymph node များ ,
antibacterial မူးယစ်ဆေးသုံးပြီးထိထိရောက်ရောက်ကု သ. သေးငယ်တဲ့အချင်းရောင်ရမ်းခြင်း။ ပိုမိုလေးနက်ပညာရေးခွဲစိတ်လိုအပ်သည်။
adipose တစ်ရှူးရောင်ရမ်းခြင်း, ကိုယ်လက်၏ရောဂါလက္ခဏာများ:
တိုး (ဒေသခံ) အပူချိန်, လက်တော်ပူခံစားရ;
လှုပ်ရှားမှုနှင့် palpation စဉ်အတွင်းနာကျင်မှု။
ကြောင့်ဖြီးအတွက်ရောင်ရမ်းဖြစ်စဉ်ကိုကိုယ်လက်အင်္ဂါ mobility ၏သိသာထင်ရှားသောချိုးဖောက်မှုများဦးတည်သွားစေနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုရန်, cellulitis ခွဲစိတ်နည်းစနစ်မှတဆင့်ကုသမှုပါဝင်သည်: အအိုင်းနာဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်အကြောင်းအရာများကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ။
နှုတ်တော် Phlegmon ကြမ်းပြင်
ရောဂါ၏ဤအမျိုးအစားနှင့်အတူ, တစ်ခါတစ်ရံအခက်အခဲအသက်ရှူခြင်းအစာစားနေစဉ်အတွင်း, နာကျင်မှုမျိုအတွက်အခက်အခဲမှတ်သား။ လည်ပင်းဧရိယာထဲမှာအီ၏ခံစားချက်ကတည်းကဖြောင့်သည်သင်၏ခေါင်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့မသက်မသာပုဂ္ဂိုလ်။ ထို့ကြောင့်ပါးစပ်မနှစ်မြို့ဖွယ်အနံ့, လည်ချောင်းတစ်ရှူးကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့အနီဖြစ်လာ, တကိုယ်လုံးရောင်။
ပါးစပ် Phlegmon များသောအားဖြင့်အခြားရောဂါများ၏နောက်ခံ (periodontitis, periodontitis) ရက်နေ့တွင်ဖွံ့ဖြိုးဒါကြောင့်ရောင်ရမ်းကုထုံးသည်သူ၏အဓိကအကြောင်းရင်းကုသမှုအပေါ်အခြေခံပါတယ်။
ကလျင်မြန်စွာအရိုး, အရိုးနုအဖုံးများနှင့်ရွတ်ဖို့ပျော့တစ်ရှူးများထံမှတတ်သောကြောင့်, ရောင်ရမ်းဒီလိုအန္တရာယ်အရှိဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်မီမကုသဘဲအဆင့်မြင့်ပုံစံများကိုဖြတ်တောက်ခြင်းဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်သည်။
လက်တွေ့အသေခံ - ကဘာကိုဆိုလိုတာလဲ၎င်း၏ရောဂါလက္ခဏာတွေ, ကြာချိန်
အသံပြာ - လူကြီးများအတွက်အကြောင်းရင်းများနှင့်ကုသရေး
အဆစ်အဆစ် - အကြောင်းရင်းများ
Cere - ထိုးဆေး
Haliksol - အသုံးပြုမှုအတွက်လက္ခဏာများ
ဘယ်လိုမိန်းကလေး christening နေကြသနည်း
စိတ်ပညာအတွက်သားကောင်များ - ကဘာလဲ?
ရှ chinchilla ဘယ်နှစ်ယောက်နထေိုငျ?
အမျိုးသမီးတွေအတွက်အနိမ့် testosterone ဟော်မုန်း
နွေဦးစုဆောင်းမှု 2014 Dior မိတ်ကပ်